रेडियो अडियोको दसौँ बार्षिक उत्सवमा कसले के भन्यो ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
रेडियो अडियोको दसौँ बार्षिक उत्सवमा कसले के भन्यो ?
२३ मंसिर,२०७३ | Forseenetwork
हरिवंश आचार्य — हरिवंश अचार्यले हाँस्यव्यङग्य आज नेपालको इज्जत भएको बताए । नेपालको शिथिलहुन पुगेको चलचित्र क्षेत्रले हाँस्यव्यङग्य चलचित्रले गर्दा नेपाली चलचित्र उद्योगले प्राण पाएको उनको भनाई थियो । नेपालको उच्च अहोदा देखि सिनेमा बनाउने महिला पनि सफल भएको बताए । कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्दै आचार्यले रेडियो अडियो हाँस्यव्यङग्यको प्लेटर्फम भएको बताएका थिए । रेडियो अडियोले हाँस्यव्यङग्यको इज्जत राख्ने काममा महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताए । यस्तै उनले एउटा गायक, संगीतकारले आवाज दिएको, रचना गरेको गीतमा मान्छे नाचिरहेका हु्न्छन् । तर जसको आवाज हो, जसको संगीत हो त्यो व्यक्तिले एक पैसा नपाउदा नेपालको संगीत क्षेत्र डामाडोलनै हुनलागेको हुँदा रोयल्टीले ठूलो भुमिका खेल्ने बताए । गायकहरुले विभिन्न कार्यक्रममा जाने मौका पाएका छन् । तर सृजना र संगीत भर्ने व्यक्ति समस्यामा परेको उनको भनाई थियो । यो कुरालाई नेपालका अन्य मिडियाले पनि अुनसरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । महजोडी संगको सहकार्य गरेको ३६ वर्ष भईरहँदा यसै गरी मिलेर काम गरे सफलता पाइने र आफू अमेरिकामा हँुदा पनि रेडियोले जन्मदिन मनाएको प्रति आफू ऋणी भएको बताए ।
मदन कृष्ण श्रेष्ठ — कार्यक्रममा मदन कृष्ण श्रेष्ठ रेडियो अडियो हास्यव्यङग्य क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएको बताए । रेडियोमा गीतकार, संगीतकार, गायक सबैको योगदानको कुरालाई सम्झेर रोयल्टी संकलनको कुराले ठूलो गुण लगाएको बताए । रेडियोबाट अब बज्ने गीतमा गीतकार, संगीतकार र गायकको नाम लिनको लागि आग्रह गरे । धेरै मिडियाहरुले यो कुराको बारेमा जानकारी नगराउँदा गीत संगीतको मर्म मर्ने गरेको उनको भनाई थियो ।
हाँस्यकलाकार किरण केसीले रेडियो अडियोले जहिले पनि फरक काम गर्ने गरेको भन्दै रेडियोको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे । पछिल्लो समय रेडियो अडियो धेरै श्रोताको मनमा बस्न सफल भएको भन्दै कालझै रेडियो गुञ्जिरहोस भन्दै शुभकामना व्यक्त गरे ।
हाँस्यकलाकार दीपक राज गिरीले रेडियो अडियो आमाको भूमिकामा रहेको बताए । हाँस्य क्षेत्रमाभएको एउटा मात्र रेडियो हुदापनि सबै हाँस्य कलाकारलाई समेट्ने गरेको भन्दै रेडियोबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको उनले बताए । रेडियो अडियो सुन्दा हाँस्यकलाकारहरुको भन्दा राम्रो प्रस्तुति भएको भन्दै रेडियोको उपनाम खित— खिते रेडियो पनि राख्न भ्याए । रेडियोले प्राप्त गरेको उचाईमा नेपालका महजोडीको ठूलो भुमिका रहेको बताए । छक्का पञ्जा चलचित्रले सफलता प्राप्त गर्नुमा रेडियो अडियोको पनि विषेश सहयोग रहेको भन्दै आफ्नो लागि रेडियो आफ्नो घर सरह भएको बताए ।
दीपाश्री निरौला — नेपाली चलचित्र छक्का पञ्जा निर्देशक दीपा श्री निरौलाले रेडियो अडियो टिम राम्रो भएको कारण आज रेडियो राम्रो भएको बताए । अन्य मिडिया भन्दा विलकुलै फरक धारमा रेडियो अडियो सञ्चालन भएको भन्र्दै रेडियोलाई सफलताको शुभकामना पनि दिइन् । साथै उनले रेडियो अडियोमा आवद्ध हुनपाएकोमा आफू भाग्य मानी भएको बताइन् । दीपा श्री निरौलाले रेडियो अडियोमा स्थापनाकाल देखिनै धनियाको दुनिया कार्यक्रम चलाउँदै आएकी छिन् ।
जितु नेपाल — नेपालका चर्चित हास्यकलाकार जितु नेपालले शुभकामना दिने क्रममा नेपालको चर्चित हास्य जोडी महको जोडीको आर्शिवादबाट शुरु भएको रेडियो अडियो अहिले देशभर गुञ्जिरहेको बताए । रेडियो अडियो सबै हास्य कलाकारहरुको एक मात्र रेडियो अडियो हामीले गर्भको ठाँउ रहेको पनि बताएका थिए । वार्षिक उत्सवको दिन रोयल्टी संकलनको काम शुरु गरेर रेडियोले राम्रो कामको सुरुवात गरेको उनको भनाइ थियो । पैसा यति आयो भन्दा पनि काम शुरु गर्नु ठूलो कुरा हो भन्दै उनले नेपालको सबै टेलिभिजन, रेडियोले रोयल्टी संकलनमा सहयोग पु¥याउने हो भने नेपालमा सर्जकहरुलाई बाँच्नको लागि गाह्रो नहुने बताए । दुख र कष्टका साथ एउटा गायकले गीत बजारमा ल्याएको हुन्छ फेरि मिडियामा उल्टै पैसा तिरेर बजाउदा कलाकारहरु मर्कामा पर्ने गरेको बताए । यस्तै उनले नेपालको हाँस्य कलाकारहरु भन्दा संगीत क्षेत्र व्यवस्थित रहेको पनि बताएका छन् । हास्य क्षेत्रको कुनै पनि संघ संस्था नहँुदा अलि गाह्रो भएको बताए । हाँस्य क्षेत्र नभइनुहने तर संगठीत हुननसकेको पेशा भएकाले कुनै समय हाँस्य कलाकारहरुले पनि आवाज उठाउनु पर्ने समय आउने बताए । कुनै पनि कार्यक्रममा हाँस्य भएनभने त्यो कार्यक्रममा निरास हुने भान धेरै ठाँउको कार्यक्रमबाट देखेको बताए । हाँस्य कलाकारलाई अपहेलना गरेको भन्दै उनले हास्य कलाकारहरु संगठीत हुन जरुरी रहेको बताए ।
नेपालमा धेरै राम्रो ब्यानरका सिनेमाहरु भन्दा हास्य कलाकारहरुले निर्देशन गरेको चलचित्रले दर्शकको माया र व्यवसायमा फड्को मार्न सफल भएको पनि भन्दै रेडियोले प्रत्येक हास्य कलाकारहरुको जन्म दिन मनाएर फरक काम गर्दे आएको पनि बताएका छन् । मनोरञ्जन सबै भन्दा ठूलो कुरा हो र त्यही कामलाई आत्मासाथ गरेर रेडियो अगाडी बढीरहेको बताए । साथै उनले अहिले रोकिएको कार्यक्रम झटारो अर्काे हप्ताबाट पुन सञ्चाल नहुने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।
गायक हेमन्त शर्मा — नेपालका चर्चित गायक हेमन्त शर्माले वि.स २०७३÷ ७४ मा रोयल्टी संकलनको लागि प्रधामन्त्री कार्यालयले पनि निर्देशन दिईसकेको बताएका छन् । कुनै पनि समयमा समस्यामा परेको रेडियोकर्मीलाई रोयल्टी संकलनबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
संगीत उद्योग संघका अध्यक्ष सूर्य मगर — रेडियो अडियो को ‘एक कान दुई कान मैदान’ सम्म पुर्याउने उदेश्य स्वागत योग्य भएको र रेडियो अडियो देशकै एक मात्र हाँस्यव्यङग्य रेडियो भएको भन्दै अबका दिनमा पनि निरन्तरताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
संगीत उत्पादक समाज नेपाका अध्यक्ष निर्मल ढकाल — रेडियो अडियो १० औँ वर्ष पुगेको अवसरमा रेडियोमा गीत बजाए बापत एक वर्षको आम्दानीको १ प्रतिशत दिने कामको सुरुवात गर्ने पहिलो रेडियो भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । रेडियोको यो कामले गीत संगीतमा लाग्ने व्यक्तिलाई उत्साह मिलेको बताए । उनले रोयल्टी संकलनगर्ने कामको शुरुवातहुन गाह्रो भएको समयमा रेडियो अडियोले गरेको यो शुरुवातलाई उदाहरणको रुपमा लिँदै देशै भर रोयल्टी संकलन अभिनय सुरु गर्ने बताए ।
संगीतकार समाज नेपालका लक्ष्मण शेष— सोहि कार्यक्रममा संगीतकार समाज नेपालका लक्ष्मण शेषले स्रष्टा र सर्जकको महत्वलाई मुल्यांकन गर्दै सुरु गरेको काम इतिहासमा कहिले पनि नमेटिने भन्दै रेडियो अडियोले गरेको काम सधै छातीमा कुदेर राख्ने बताए । अब आउने दिनहरुमा कुनै पनि स्रष्टाहरुले दुख पाउँदैन भन्ने कुराको विश्वास दिलाउँदा रेडियो अडियो बधाईको पात्रभएको बताए ।
रोयल्टी संकलन समाजका महासचिव रमेश खड्का— कार्यक्रममा रोयल्टी संकलन समाजका महासचिव रमेश खड्का रेडियो अडियो किनयति धेरै अग्लो विल्डीङमा बसेरको होलाभन्ने आज भन्दा १० वर्षपहिला सोचेको र आज आएर थाहा पाएको बताए । खासमा रेडियोले ठूलो काम गर्नको निम्ती रहेछ अग्लो ठाँउमा बसेको बताए । नेपाली श्रष्टाहरुको इतिहासमा रोयल्टीको आन्दोलनमा धेरै वर्ष भयो कुदेको देशको ४ सय ५० वटा रेडियोहरुमा पुग्यौ होला हामी तर त्यो कामको सफलता प्राप्त गर्न नसकेको बेलामा रेडियोले ठूलो भुमिका खेलेको बताए । उनले यही अग्लो विल्डीङ र अग्लो मन,विचार भएको रेडियो बाट सुरु भएकोले सफलता पाउने बताए । बार्षिक आम्दानीको १ प्रतिशत रोयल्टी वितरण गर्ने काम सबै श्रष्टाहरुले सधैब सम्झने बताए । वि.स २०७३÷७४ को रोयल्टी उठाउने अभियानमा पहिलो रेडियो अडियो बन्न पुगेको बताए । यो रोयल्टी संकन गर्ने काम देश व्यापी रुपमा संचालनगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
तुलसी पराजुली — कार्यक्रममा तुलसी पराजुलीले सबै मिडियाले वार्षिक उत्सव मनाउछन् केक काट्ने काम हुन्छ तर चेक साट्ने काम कमै मात्र काममा रेडियो अडियो पनि एउटा रहेको बताए । यो अन्य मिडियाहरुको लागि गतिलो उदाहरण बनेको उनले भनाइ थियो ।